Archive du 20171223
Andranobevava Tovolahy Malagasy nisy naka an-keriny
Nitrangana fakana an-keriny indray omaly zoma 22 desambra. Tovolahy teratany Malagasy fantatra amin’ny anarana Nathan Andriantsitohaina, zanaka mpandraharaha, no lasibatra.
Beriziky kandidan’ny UNDD Manana ny heviny i Manoro Régis
Nitondra fanazavana mikasika ny feo re sy ny resaka mandeha fa ny praiminisitry ny tetezamita iraisana, Jean Omer Beriziky no kandida tohanan’ny antoko UNDD (Union Nationale Pour le Développement et la Démocratie) amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, ny Sekretera jeneralin’ny antoko Manoro Régis.
Ankorondrano Lasa “Gymnase”an’ny HVM koa ?
Lasa fananan’ny HVM angaha ny kianja mitafon’Ankorondrano ? Izay no fanontanian’ny maro manoloana ny zava-nitranga omaly teny.
Fitondrana HVM Mandrora mitsilany
Nandrorona tanteraka ny firenena malagasy nandritra izay efa-taona nitondran’ny Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) azy izay. Efa tsapa aloha fa ny fisian’ilay « Ni…Ni »
Constant Raveloson Namaky bantsilana ny paipaikan’ny HVM
Elaela no tsy nahenoana ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika, Constant Raveloson, mpikambana eo anivon’ny antoko MFM sy ny komity miaro ny fiainam-bahoaka KMFB.
Rivo Rakotovao « Enga anie … ! »
Nanatanteraka fihaonambe voalohany tamin’ireo birao ifoton’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara na ny HVM isam-pokontany eto Analamanga tetsy amin’ny Gymnase Ankorondrano omaly ny filoha nasionalin’ny antoko,
Dr Jean Louis Robinson Nizara “kits scolaires” tany Ampasikely
Tafiditra amin’ny fanamarihana ny fetin’ny Noely. Anikizy miisa 564 mianadahy avy amin’ny ambaratonga fototra amin’ny sekolim-panjakana sy tsy miankina amin’ny fanjakana miampy ankizy 113
Taratasin’I Jean Sarimihetsika dia sarimiaina
Miarahaba e ! Dia tena mahatsikaiky hay ianareo ireto ry Jean ka, mba marina moa ! Ianareo mihitsy hay no tena mivoy fankan-tahaka sy fangalaran-tahaka eto an-tanàna eto.
Fitsarana Miasa sasatra 24 andro
Hanomboka omaly zoma 22 volana desambra 2017 ny fialantsasatry ny Fitsarana (vacances judiciaires) ary haharitra 24 andro izany hoe : hatramin’ny alahady 14 janoary 2018.
Tsenan'ny akoho amam-borona Mpanontany no betsaka
“Tsy misy tsena, mpanontany no betsaka !”. Izay no valintenin’ireo mpivarotra akoho amam-borona etsy Anosibe sendra ny Tia Tanindrazana amin’izao tsenan'ny Noely sy ny faran'ny taona izao.
ECCOVA Antananarivo Mametraka amin’ny toerany ny asa tanana Malagasy
Misedra olana ny asa tanana Malagasy, indrindra fa ny fanamboarana fitafiana noho ny fitobaky ny fripy.
Vondrona STAR Tsy manadino ireo niangaran’ny vintana
Tsy manadino ireo sahirana sy niangaran’ny vintana ny vondrona Star amin’izao ankatoky ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao. Nisy ny fizarana fanomezana nataon’izy ireo nahitana fotsimbary, siramamy, menaka, savony ho an’olona an-jatony.
Andoharanofotsy Nentina am-bavaka ny asan’ny kaominina
Tontosa omaly tao amin’ny fiangonana Fjkm Mahalavolona ilay fotoam-pivavahana lehibe nokarakarain’ny kaominina Andoharanofotsy nentina nitondrana am-bavaka ny asa hotanterahin’izy ireo amin’ny taona 2018 ho avy io.
Vary simba 20 kaontenera Sakanan’ny fanjakana ny fandorana azy
Hahagagana sy hatezerana ny an’ny fitsarana sy ny ladoany ary ny orinasa tompon’ireo kaontenera miisa 20 misy vary efa ela no lo ao amin’ny resanan-tsambon’i Toamasina, fa raha nivoaka ny didim-pitsarana laharana 2030-AG/17 ny 08 desambra 2017 teo,
Tonelina Ambohidahy Mitombo isa ireo tonga matory ao
Mitombo isa, lasa marobe ireo fianakaviana sahirana no tonga matory etsy ambany tonelina Ambohidahy ankehitriny.
Faritra Analamanga « Nanahirana ny 2017 », hoy i Ndranto Rakotonanahary
Somary latsaka kely raha oharina amin’ny tamin’ny taona 2016 ny taona 2017 ny vokatra teto Analamanga,
Marc Ravalomanana mivady Mitondra fanantenana
Mitety Boriborintany, mizara hafaliana sy fanantenana amin’ny vahoaka, indrindra ny Zokiolona sy ny marefo ara-pivelomana, ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana amin’izao ankatoky ny Noely izao.
Kitra - Fifidianana filohan’ny ligy Afaka herinandro ny fanapahan-kevitra
Andrasan’ny maro tokoa ny ho tohin’ny fifidianana filohan’ny ligin’ny baolina kitra manerana ny Nosy,
Rugby - Malacam Omby mifahy 5 no hiadiana amin’ny alahady izao
Hafana dia hafana ny lalao rugby hotontosaina eny amin’ny kianjan’i Makis Andohatapenaka rahampitso alahady 24 desambra.
Karazam-biby misy eto Madagasikara ny sokina sy ny trandraka, izay rehefa mahatsiaro ny tenany ho misy manambana dia hatsangany ny tsilo mandrakotra ny vatany sady mamonkona ny vatany ho lasa boribory.
Seranam-piamanidina Ivato Vita tsara tarehy ny toerana fandraisana olona
Mitohy ny asa fanavaozana ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny Fascene ao Nosy-Be tanterahin’ny Ravinala Airports.
Kamiao mandeha antoandro Mampitohana fifamivoizana eto an-drenivohitra
Vao mainka mitohana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra amin’izao ankatoky ny fety izao.
Banky - BNI Madagascar Niampy iray indray ny masoivohony
Niampy iray ny masoivohon’ny banky BNI manerana ny Nosy. Tao Mampikony, faritra Sofia no nametrahana izany, entina hanampiana sy hikarakarana ny mpanjifa.
Ambatondrazaka Voasambotra ilay mpanamboatra basy poleta
Saron’ny polisy ao Ambatondrazaka ny ankohonana iray mpanamboatra basy poleta. Ny zanany lahy saika hanapoaka ilay basy tany an-tsena no niandohan’ny fanadihadiana.
Polisim-pirenena Miampy 745 ireo amperinasa
Tontosa omaly ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo polisy vaovao niisa 745 mianadahy, tao amin’ny Sekolim-pirenen’ny polisy tao Antsirabe.